चितवनको दुई स्थानमा बम विस्फोट, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » चितवनको दुई स्थानमा बम विस्फोट
चितवनको दुई स्थानमा बम विस्फोट
चितवन। चितवनको दुईस्थानमा आईतबार बिहान बम विस्फोट भएको छ। चितवनको भरतपुरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आईतबार बिहान पौने ४ बजेतिर बम बिस्फोट भएको हो। सुपरमार्केटको कम्पाउण्डमा बम बिस्फोट हुदाँ सुपरमार्केटको सिसाहरु फुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रभु ढकालले जानकारी दिए।
बिस्फोटबाट भाटभटेनी सुपरमार्केट नजिक रहेको रोयल सेन्चुरी होटलको समेत केही झ्यालको सिसाहरु फुटेका छन्। त्यस्तै पुर्वीचितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर १ को वडा कार्यालय अगाडी समेत बिहान बम बिस्फोट भएको छ।
बिस्फोटबाट कुनै क्षती नभएको प्रहरीले जनाएको छ। बम बिस्फोट कसले गराएको हो भन्ने एकिन नभएपनि बन्दकर्ता नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले बिस्फोट गराएको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। बम बिस्फोट गराउनेहरुको खोजीकार्य तिव्र पारेको प्रहरीले जनाएको छ।
चितवनमा लामो दुरीका यात्रुबाहक बस चलेका छैनन् भने बजार पनि आशिंक रुपमा मात्रै खुलेका छन्। कक्षा ११ को परिक्षा संचालन भएपनि अन्य शैक्षिक संस्था भने बन्द छन्।